Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ )
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 03/05/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ကဘာလဲ။
ဆီးခုံသန်းများကို crabs များဟုလည်းခေါ်ပြီး လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်တွင် အလွန်သေးငယ်သော အင်းဆက်များ ကူးစက်ပေါက်ဖွားသည့် အခြေအနေကို ဆိုလိုပါသည်။ လူသားများကို ကူးစက်တတ်သည့် သန်းသုံးမျိုးရှိသည်။
Pediculus humanus capitis: ခေါင်းသန်း
Pediculus humanus corporis: ကိုယ်သန်း
Phthirus pubis: ဆီးခုံသန်း
သန်းများသည် လူသွေးကိုစားသုံးပြီး ရှိသည့်နေရာတွင် အလွန်အမင်းယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဆီးခံသန်းများသည် ဆီးခုံမွှေးများတွင်နေထိုင်လေ့ရှိပြီး လိင်ဆက်ဆံစဉ် ကူးစက်တတ်ပါသည်။ တစ်ချို့ရှားပါးသော ဖြစ်ရပ်များတွင် မျက်တောင်မွှေး၊ ချိုင်းမွှေးနှင့် မျက်နှာမွှေးများဆီသို့ပါ ပျံ့နှံ့တတ်ပါသည်။ ကိုယ်သန်းခေါင်းသန်းများထက် ဆီးခုံသန်းများက ပိုသေးငယ်သည်။
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆီးခုံသန်းများသည် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများ ရှိသူများတွင် ပိုအဖြစ်များသည်။ သို့သော် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆီးခုံသန်းများသည် ကူးစက်ပြီးနောက် ၅ ရက်အတွင်း လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်နှင့် စအိုနေရာတို့တွင် ယားယံခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ညအခါတွင် ယားယံမှုမှာ ပိုပြင်းထန်၏။
ကိုက်ခံရသည့်နေရာတွင် အပြာဖျော့ရောင် အစက်များကျန်ခြင်း
ပြင်းထန်စွာယားယံလျှင် အနာများဖြစ်စေတတ်သလို ကိုက်သည့်နေရာများမှလည်း ပိုးဝင်နိုင်ပါသည်။ မျက်တောင်မွှေးတွင် သန်းရှိသောကလေးများတွင် မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ခြင်း (ပန်းရောင်မျက်လုံး) ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
စောလျင်စွာသိရှိကုသခြင်းသည် ထိုအခြေအနေ ဆိုးဝါးသွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပြီး တခြားသော အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုလည်း မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေများကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆရာဝန်နှင့် စောနိုင်သမျှစောစော ဆွေးနွေးပါ။
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဆီးခုံသန်းများသည် လိင်ဆက်ဆံစဉ် ထိတွေ့မိရာမှ ကူစက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စောင်များ၊ တဘက်များ၊ အိပ်ယာခင်းများ အဝတ်အစားများကို ဆီးခုံသန်းရှိသူနှင့် မျှသုံးခြင်းသည်လည်း ကူးစက်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသန်းများသည် အရေပြားနှင့်နီးသည့် ဆံပင်ချောင်းများတွင် ဥများချတတ်၏။ ဥများကို nit ဟုခေါ်သည်။ ၇-၁၀ ရက်အတွင်း nit မှ nymphs အဖြစ် အကောင်ပေါက်လာပြီး သွေးကိုစစုပ်ပါသည်။ သွေးမရပဲနှင့်တောင်မှ တစ်ရက် နှစ်ရက်ကြာအောင် အသက်ရှင်နိုင်ပါသည်။ လူအများယုံထားကြသည်မှ ဘိုထိုင်အိမ်သာခုံနှင့် ပရိဘောဂများမှလည်း ကူးစက်တတ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြ၏။ ဆီးခုံသန်းများသည် မသေမချင်း လက်ခံလူမှ ပြုတ်ကျသည်မရှိပါ။ လှေးများကဲ့သို့လည်း တစ်ဦးမှတစ်ဦးဆီ ခုန်ပေါက်မကူးတတ်ကြပါ။
သင့်၌ ဆီးခုံသန်းများရှိလျှင် ကလေးများကို အတူမအိပ်ခိုင်းပါနှင့်။ ဆီးခုံသန်းရှိသူနှင့် တစ်ညတာအိပ်စက်မိရုံနှင့် ကလေးများကို ကူးစက်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေးများတွင် ထိုသန်းများသည် မျက်တောင်နှင့် မျက်ခုံးမွှေးတို့တွင် နေထိုင်လေ့ရှိကြ၏။ ကလေးတွင် ဆီးခုံသန်းများရှိကြောင်းတွေ့ရလျှင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရထားကြောင်း ပြဆိုခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဆီးခုံသန်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
ကူးစက်ခံရသူနှင့် အဝတ်အစား အိပ်ယာခင်းများ မျှဝေသုံးခြင်း
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်၌ ဆီးခုံသန်းများရှိကြောင်း ဆရာဝန်မှသံသယရှိလျှင် စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ပါလိမ့်မည်။
သန်းများသည် များသောအားဖြင့် မီးခိုးဖျော့ဖျော့ရှိပြီး သွေးဝနေလျှင် အမည်းရောင်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်၌ ဂဏန်းပုံစံအင်းဆက်လေးများ ဆီးခုံမွှေးထဲရွေးလျားကြောင်း မြင်ပါက ကူးစက်ခံထားရပြီး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သန်းဥများသည်လည်း ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သိနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဥများသည် သေးငယ်သော အဖြူရောင်ဥများဖြစ်ပြီး ဆီးခုံမွှေးအရင်းသို့မဟုတ် တခြာကိုယ်အမွှေးအရင်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။
ဆီးခုံသန်းကူးစက်ခံရသည့်လက္ခဏာများ ရှိလာသော်လည်း အကောင်တစ်ကောင်မှ မမြင်ရဘူးဆိုလျှင်တောင် ဆရာဝန်နှင့်ပြသရပါမည်။
Pubic Lice (ဆီးခုံသန်းများ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆီးခုံသန်းများကုသရာတွင် သင့်ကိုယ်သင်ရော၊ အဝတ်အစားများ၊ အိပ်ယာခင်းများကိုပါ ပိုးဖယ်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
လိမ်းဆေးများ၊ အလွယ်ဝယ်ယူနိုင်သည့် လိုးရှင်းနှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်များကိုသုံးပြီး ဆီးခုံသန်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်၊ နို့တိုက်နေရလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးကိုကုသရမည်ဆိုလျှင် စိတ်ချရမည့်ပစ္စည်းများအကြောင်း ဆရာဝန်အား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သန်းကူးစက်မှုနည်းသည်ဆိုပါက ဆီးခုံမွှေးအား လျှော်လိုက်ရုံသာပင်။
လုံးဝကင်းစင်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ခေါင်းမာသည့်ဥများက ဆံပင်များတွင် ကပ်ကျန်နေနိုင်ပါသေးသည်။ မွှေးညှပ်ဖြင့် ထိုသန်းဥများအား ဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ အိမ်သုံးကုထုံးများဖြစ်သော အမွှေးရိတ်ခြင်း၊ ရေပူနှင့်ချိုးခြင်းစသည်တို့သည် ဆီးခုံသန်းများကိုကုသရာတွင် အကျိုးမရှိပါ။ သန်းများသည် သာမာန်ဆပ်ပြာနှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်များသုံးရုံနှင့် အလွယ်တကူ မသေပါ။
သင့်အိမ်ထောင်စုမှလူအများအပြား ဆီးခုံသန်းရှိနေလျှင် လူတိုင်းကို တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုသရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်အိမ်ကိုလည်း သန်းဖယ်ထုတ်ရပါမည်။ တစ်အိမ်လုံးအား ဖုံစုပ်စက်နှင့်သန့်ရှင်းခြင်း၊ ရေချိုးခန်းအား ချွတ်ဆေးများဖြင့် ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ တဘက်များ၊ အိပ်ယာခင်းများ၊ အဝတ်အစားများအား ပြုတ်ပြီး စက်နှင့်အခြောက်ခံကာ အမြင့်တွင်လှမ်းပါ။
ထိုအရာကိုတောင်မှ သန်းကခံနိုင်ရေရှိနေလျှင် အားပြင်းသည့်ဆေးများ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။
မျက်တောင်တွင် ဆီးခုံသန်းများကပ်နေပါက ပက်ထရိုလီယမ်ဂျယ်လီနှင့် မျက်တောင်နှင့် မျက်ခွံအား တစ်ရက်သုံးကြိမ်းနှုန်း ရက်အနည်းငယ်အထိ လိမ်းပေးပါ။
သန်းကိုက်ရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်နေလျှင် တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကြာသည်အထိ ယားယံနေတတ်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ဆီးခုံသန်းများ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ဆီးခုံသန်းများ ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
သန်းရှိသူနှင့် အဝတ်အစား၊ အိပ်ယာခင်း၊ တဘက်များ မျှသုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။
ကုသမှုမပြီးသေး မအောင်မြင်သေးခင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းအား ရှောင်ပါ။
ဆီးခုံသန်းများရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီးပါက ယခင်ကရော လတ်တလောတွင်ပါ လိင်ဆက်ဆံထားသူများဆီ အကြောင်းကြားပါ။ ထိုမှသာ သူတို့လည်း စောစောကုသမှုခံယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Public lice. http://www.healthline.com/health/std/pubic-lice#Prevention6 . Accessed March 18, 2017.
Public lice. https://medlineplus.gov/ency/article/000841.htm . Accessed March 18, 2017.
Public lice. https://www.plannedparenthood.org/learn/stds-hiv-safer-sex/pubic-lice . Accessed March 18, 2017.